त्रिविका प्राध्यापक नीजितिर पल्किँदा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापक, उपप्रध्यापक, सहप्रध्यापक र शिक्षण सहायकले स्वीकृति नै नलिई विभिन्न निजी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउँदै आएको पाइएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबैभन्दा पुरानो प्राज्ञिक थलो त्रिविमा यस्तो चरम बेथिति देखिएको हो ।
त्रिविका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा २५ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको छ । ९० दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित भएको भन्दै विशेष सजायअन्तर्गत उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको हो । यसरी हटाइएकामा निजी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउनेहरू पनि रहेको त्रिवि स्रोतले बताएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा बिनाजानकारी लगातार ९० दिनसम्म क्याम्पस वा कार्यालयमा उपस्थित नभए सेवाबाट हटाउने उल्लेख छ । अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम २०७३ मा त्रिविबाहेक अन्य संस्थामा आंशिक रूपमा काम गर्न चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्रिविको कामकारबाहीमा असर नपर्ने गरी स्वीकृत दिन सक्ने उल्लेख छ ।
पूर्वस्वीकृतिबिनै निजीमा अध्यापन
४५ जना कारबाहीमा
यस्तै, त्रिविले त्रिविको नियमानुसार हालै २० जना कर्मचारीलाई काम गर्न सचेत गराई नसियत दिएको छ ।
राजधानीसहित देशभर ६१ आंगिक क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसमा अध्यापनरत केही प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र शिक्षण सहायकले निजी शिक्षण संस्थामा समेत पढाउँदै आएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला त्रिविले किनेको समयमा अन्यत्र पढाउन जानु सम्बन्धित व्यक्तिको बद्मासी रहेको बताउँछन् । उनी त्रिविको प्राध्यापनमा असर पार्ने गरी अन्यत्र पढाउन जान नपाइने र स्वीकृत लिने विषयलाई पनि कडाइ गरिनुपर्ने बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पूर्वस्वीकृतिबिना अन्यत्र पढाउन नपाइने बताए ।
‘अन्यत्र पढाउँदा पूर्वजानकारी लिनैपर्छ । बिनाजानकारी कहीँ कतै पढाउन मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने ।
अस्कल क्याम्पसका प्रमुख उमाकान्त कर्णले कसैले पनि क्याम्पस समयमा अन्यत्र पढाउन नमिल्ने बताए । उनले क्याम्पसमा तोकिएको समयमा अन्यत्र पढाए÷नपढाएबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिने र त्रिविले नियमानुसार कारबाही गर्ने बताए ।
अनेरास्ववियूका अध्यक्ष ऐन महरले त्रिविका प्राध्यापकले निजीमा पढाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले त्रिविका प्राध्यापकले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको र त्रिविभन्दा निजीमा बढी ध्यान दिने गरेको आरोप लगाए ।
त्रिवि योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. रिदीश पोख्रेलका अनुसार केन्द्रीय क्याम्पससहित ६१ आंगिक क्याम्पसमा अहिले ३ लाख ९२ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस्तै, १६ हजार ६१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । (राजधानी दैनिकबाट)
२०७६ जेठ १३ सोमबार ०७:००:०० मा प्रकाशित